Mapurisa Okurudzirwa Kusunga Vanotyora Mutemo muNguva yeSarudzo
Chivabvu 20, 2018
Mapato ezvematongerwo enyika ari kurudzira mapurisa kuita basa ravo nemazvo munguva yesarudzo.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nemusi weMugovera pakamba yemapurisa muChinhoyi, vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika anoti MDC-T inotungamirwa naVaNelson Chamisa, Zanu PF neZimbabwe People’s First vakati mapurisa haafanire kuzengurira pakuita basa ravo.
VaRueben Njiva vanoti mapurisa anofanirwa kusunga vose vanenge vapara mhosva ipapo kwete kuti vamwe vanozosungwa kana sarudzo dzapera.
VaKudakwashe Chigumo veMDC-T avo vakamborohwa mumhirizhonga yesarudzo dzemuna 2008 vanoti mapurisa anofanirwa kuita makomiti pamwe chete nemapato ezvematongerwo enyika kudzivirira mhirizhonga mumatunhu maduku.
VaSimon Solomon avo vaimirira bato reZanu PF vanobvuma kuti mapurisa ainge asingaite basa ravo nemazvo musarudzo dzekumashure asi vanoti vanhu vanofanirwa kukanganwirana kuti nyika ienderere mberi.
Mukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwemabasa, kana kuti Operations, VaThulani Ncube vanoti mapurisa achaita basa ravo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo uye vasinga taurirwe zvekuita nevezvematongerwo enyika.
Mukuru weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, mudunhu reMashonaland West VaAustin Ndlovu vakakurudzira vezvematongerwo enyika kuti vatevedzere zvinodiwa nemutemo uye kuti vatori venhau varegwe vachiita basa ravo nemazvo.
Musangano uyu ndiwo wekutanga kuitwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika, mapurisa, vekutongwa kwedzimhosva pamwe neZEC nedonzvo rekudzikisa huwandu hwemhosva dzinechekuita nemhirizhonga.
Sarudzo dzemuZimbabwe makore apfuura dzange dzichizivikanwa nekudeuka kweropa zvakapa kuti vamwe vakuru mubato reZanu-PF vagume vatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira.